SONATA-CANTATA: ရောင်ခြည်တော် ဘုရားပင့်
အင်္ဂီရသဿ ဥဏ္ဏာယ၊ ဒါဌာဟိ သေတရံသိယော၊
၀ဇီရာဝ ၀ိရောစန္တိ၊ ဇိနော မေ ဌာတု သီသကေ။
အယုတ်အလတ် အမြတ်ပိုင်းခြား လွန်ကြိုးစားသည့်
သုံးပါးဆယ်လီ ပါရမီတော် အဟုန်တို့ကြောင့်
အင်္ဂီရသ ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ထူးကို
ဘမုကန္တရေ မျက်ခုံးတော် နှစ်သွယ် အလယ်ဗဟို တည့်တည့်၌
သဉ္ဇာတာယ နုဖြူထွားထွား ကောင်းစွာ ပေါက်ဖွား၍နေသော
ဥဏ္ဏာယ စ -
ဆွဲလို့ဆန့်လျှင် နှစ်တောင်ခန့် ရှည်လျားသဖြင့်
စိန်သားနှစ်အသွင် ငွေနန်းချည် အမျှင်ကဲ့သို့
ဒါဌာဟိ စ -
မပေါ်အောင် ဖုံးပိတ်၍ ထားအပ်သော
စိန်တောင်ကို တိမ်အရောင်ဟပ် သကဲ့သို့
သော ဇိနော -
ခန္ဓာငါးစု ငါဟုသမုတ် အကျွန်ုပ်၏
ဓမ္မဟေ၀န် - စိန်ရောင်ခြည် ဘုရားပင့်
မင်္ဂလာ သတင်းစဉ် - စိန်ရောင်ခြည် ဘုရားပင့်
အမ အသံထွက်၍ ဖတ်သွား၏
မြတ်နိုးဆိုနေကျလေးနဲ့ နဲနဲ ကွာတယ်သိလား
အမတို့ ထောင်ထဲမှာ ညဖက် ဘုရားရှိခိုးရင် အဲဒီဘုရားပင့်ရွတ်တယ်။ တခါတလေကျ နောက်တမျိုးနဲ့ ပင့်တာပဲ။ နည်းနည်းတောင်မေ့နေပြီ။ ခု ဒီဘုရားပင့်လေးကို ပြန်ကူးထားလိုက်ပြီ။ အမလဲ ရွတ်ကြည့်နေမိတယ်။
အဖေအမြဲရွတ်နေကျ စိန်ရောင်ခြည်ဘုရားပင့် ဘုရားရှိခိုးကို ပြန်ဖတ်လိုက်ရလို့ အဖေ့ကိုတောင် သတိရသွားတယ်။
တချို့နေရာလေး နည်းနည်းကွာတာကလွဲရင် တူတူပါပဲ။
သာဓုသာဓုသာဓုပါရှင်။ ဖွားဖွားကို လွမ်းမိပါသည်။ ဖွားဖွား ဆိုနေကျမို့ လို့ ပါ။
အမ.. နမောတေဂါထာနဲ့အနက်ကိုဓမ္မဒါန လုပ်ပါပေးပါနော်
စိမ်း ရေ sonata.cantata@gmail.com ကို email address လေးပို့ထားပေးပါနော်
သာဓုပါ သီတာ... မွန့်ဆီမှာ နာရင်း သီတာ့စာသားတွေ လိုက်ဖတ်နေတယ်..။ အသံလေးက ကြည်ပြီး စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာ.. သမီးလေးတောင် လာနားထောင်ရင်း ဘယ်သူလဲဆိုလို့ သမီးကို ခွေးရုပ်လေးပေးလိုက်တဲ့ အန်တီသီတာလေ ဆိုတော့..အန်တီသီတာဘုရားစာရွတ်နေတာလားဆိုပြီး ပြုံးပြုံးလေး လာနာသွားတယ်..။ ဘယ်လို ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ ရမလဲဟင်..
အလုပ်မှာအဆင်မပြောလို့ နားမထောင်ခဲ့ရဘူး.. အသံထွက်တွေကိုသိချင်တယ်.. ၈တန်း၊ ၉တန်းတုန်းက နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ကျောင်းမှာဓမ္မစင်္ကြာရွတ်တုန်းက စိန်ရောင်ခြည်ဘုရားပင့်တော့ သားရွတ်ရတာ.. အမွှန်းအပါအ၀င်ပဲ.. အသံထွက်ကတော့အကုန်မှန်ချင်မှမှန်လိမ့်မယ်.. ဒီဘုရားစာတွေက အသံနေအသံထားအမျိုးမျိုးပြောင်းဆိုနေကြတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဆွဲအငင်၊ အဖြတ်အတောက်တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။
အခုထိအဲ့ဒီတုန်းကအကြောင်းတွေအကုန်မှတ်မိနေတယ်.. ထပ်ရွတ်ကြည့်သွားတယ်.. ဒီတရားစာတွေမမြင်ရတာအတော်ကြာနေပြီလေဗျာ..
မ ရေ… စာသားလဲ ဖတ်ပြီးပြီ… မှတ်ပြီးပြီ… ကြည်လင်တဲ့ အသံလေးလဲ နားထောင်ပြီးပြီ… ဓမ္မဒါနအတွက် ကျေးဇူးပါ မ ရေ…
Strange... I'm hearing no sound from the playback. I think my computer (an Apple Macbook) should be able to play MP3 files. I'll check try to see what's wrong.
အသံထွက်လေးလိုချင်လို့ပါဗျ ဘယ်မှာရမလဲမသိဘူးး ဒေါင်းချင်လို့ပါ
Alvin... Thanks. I've just realized that the link was broken. Uploaded the new file and it should be working now.
လောင်းရိပ်... အသံဖိုင်လင့်ကို ပြန်ပြင်ထားပါတယ်။ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
အဆင်ပြေရင်အသံဖိုင် ပြန်တင်ပေးပါလားရှင်... ယခင်တင်ထားတဲ့လင့်ခ်တွေက ယခု ဒေါင်း လို့ မရတော့လို့ ပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
အဆင် မပြေ သေးရင် ပြောပါနော်